दिल्लीको प्लेइङ सेटमा पर्न सन्दीपलाई किन मुस्किल ?सन्दीपले कहिले खेल्लान् ? – Esewanews
Home / Headline / दिल्लीको प्लेइङ सेटमा पर्न सन्दीपलाई किन मुस्किल ?सन्दीपले कहिले खेल्लान् ?
दिल्लीको प्लेइङ सेटमा पर्न सन्दीपलाई किन मुस्किल ?सन्दीपले कहिले खेल्लान् ?
Shivaram Khadka Headline, कला/खेल Leaveacomment 10056 Views
इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल)को १३औं संस्करण अहिले संयुक्त अरब एमिरेट्स (युएई)मा चलिरहेको छ । विश्वकै चर्चित र स्टार खेलाडीको जमघट हुने लिगलाई नेपालीहरुले पनि निकै पछ्याइरहेका छन् । एकजना स्वदेशी क्रिकेटरको पनि उपस्थिति भएकाले नेपालीको अतिरिक्त चासो आईपीएलमा छ ।
१५ आश्विन २०७७, बिहीबार १२:२१